Shirkada Ring ayaa ku dhawaaqday kaamero duuleysa oo ilaalineysa guriga xiliga aad ka maqan tahay… – Hagaag.com
Posted on 26 Seteembar 2020 by Admin in Technology // 0 Comments
Shirkada Ring ayaa ku dhawaaqday kaamero la yiraahdo (Ring Always Home Cam) oo ka mid ah kaamaradaha ammaanka oo iska leh shirkada Amazon ayaa waxay kormeer gudaha ku sameyneysaa iyadoo ku duuleysa agagaarka guriga si ay u ilaaliso inta aad banaanka ka joogtid guriga.
Kaamiradani duuleysa waxay si madaxbanaan u dul wareegi kartaa gurigaaga, iyadoo soo direysa digniino haddii ay ogaato kuwa ku soo xadgudbay ama dab ama xaaladaha degdegga ah inta aad ka maqantahay guriga.
Shirkadda ayaa sheegtay in ujeedkoodu tahay inay ka caawiso dadka inay la socdaan guryahooda iyadoon loo baahnayn inay rakibaan kamarado badan. Isticmaalayaasha waxay u dejin karaan waddo gaar ah kamaradda iyagoo ku wareejinaya guriga oo dhan, waxayna baari kartaa wixii khalkhal ah sida ku soo xadgudubka ama dabka haddii muuqaalka Ring Alarm-ka la shido.
Website-ka Business Insider oo soo xiganaya shirkadda ayaa sheegtay in qalabkan uu wax duubi karo oo keliya inta uu duulayo, wuxuuna bixinayaa codka digniinta ee uu duubay, haddii markaasi aanu jirin kormeer waxaa dhaceysa in kaamirada la damiyo, batteriguna wuxuu shaqeeyaa qiyaastii 5 daqiiqo maxaa yeelay kamaradda ayaa loogu talagalay inay sameyso safarro gaagaaban oo keliya oo qaadanaya hal daqiiqo oo keliya. Qalabka ayaa lagu iibsan doonaa $ 250 marka la soo saaro 2021.
Amazon ayaa heshay Ring horaantii 2018 oo ku bixisay $1 bilyan, waxayna la kulantay waxoogaa muran oo ku saabsan waxyaabaha khaaska dadka u ah iyo ammaanka badeecadaheeda kormeerka, maaddaama iskaashi ay la leedahay boqolaal waaxyo booliis ah oo ku yaal Mareykanka oo dhan taas oo kor u qaadday walaacyada u doodayaasha khusuusiyaadka, kooxaha xuquuqda madaniga iyo sharci-dajiyayaasha.
Ring ayaa soo laabtay shalay si ay u sheegto inay qorsheyneyso inay hagaajiso amniga alaabada ay soo saarto. Waxay shaaca ka qaaday inay soo saarayso tiknoolajiyad digital ah oo loogu talagalay aaladaha qaarkood dabayaaqada sanadkaan, inkasta oo aysan cayimin badeecadaha la jaan qaadi kara barnaamijkan.